Ampanotokana Mahitsy: saron’ny zandary ny drakaka tsy manaraka fenitra | NewsMada
Ampanotokana Mahitsy: saron’ny zandary ny drakaka tsy manaraka fenitra
Tratran’ny zandary manao sakana etsy Ampanotokana Mahitsy, ny asabotsy teo ny fiara miisa telo avy any Mahajanga sy Ambanja ary Antsohihy, nitondra drakaka (crabe) tsy manaraka ny fenitra. Andrasana ny ho tohin’ny fanadihadiana momba ity raharaha ity.
Tsy tokony ho azo hazaina ireo drakaka mirefy latsaky ny 11 santimetatra ireo ny habeny nefa izao nentina aty an-dRenivohitra izao. Voalohany nandalo ilay ilay fiara « Volkswagen Elter” miloko fotsy ary nosakanan’ny zandary. Nantsoina avy eo ny avy amin’ny Centre Surveillance de peche (CSP), saingy tsy nisy ny fisavana natao fa hatao any amin’ny toerana hivantanan’ireo drakaka ao amin’ny orinasa iray izany. Voalaza anefa fa nanaraka ny fenitra ny entana. Nandalo koa ny fiara faharoa sy fahatelo ary nahitana sobika maromaro nisy drakaka latsaky ny 11 santimetatra ny refiny.
Hatreto, tsy nahazoana vaovao ny teo anivon’ny CSP manoloana ireo drakaka voalaza ho tsy manaraka ny fenitra ireo. Tsy mazava na nisy na tsia ny fanagiazana ireo drakaka tsy ampy refy.
Tsiahivina fa manenjika fifanarahana ireo mpandraharaha vitsivitsy nahazo tombony manokana afaka manondrana an’itony hazan-dranomasina drakaka itony amin’izao fotoana izao. Mitombo ny tinady avy amin’ny mpanjifa any amin’ny firenena any ivelany any.
Fanaovana ampihimamba ny fanondranana
Etsy andaniny, miisa dimy ireo mpandraharaha manao ampihimamba ny fanondranana drakaka ireo eto amintsika raha miisa 11 ireo nomen’ny fanjakana fahazoan-dalana afaka manao izany. Manao ny tiany atao ireto mpandraharaha nahazo tombony manokana ireto ary mifehy tanteraka izany seha-pihariana izany. Velon-taraina ny mpanjono satria tsy mihoatra 7 000 Ar ny kilao hividianan’izy ireo izany. Tafakatra hatrany amin’ny 16 000 Ar anefa izany teo aloha fony afaka nanondrana daholo ny mpandraharaha rehetra. Araka izany, ahina ho lany tamingana tanteraka koa ireo drakaka ireo amin’ity fanondranana tsy manaraka ny fenitra ity.